China Indoor Plant Dracaena Sanderiana gburugburu Kechioma achara ụlọ ọrụ na-emepụta | Anwụ na-acha Ifuru
Ime ụlọ Osisi Dracaena Sanderiana gburugburu kechioma achara
Achara Lucky, aha botanical: "Dracaena Sanderiana". Ọ bụ onye achara na ụdị ahịhịa ime ụlọ.
Dabere na nkwenkwe ndị China: Ọwara achara bụ akara nke ọdịmma, ọ nwere ike ime ka ike dị mma na gburugburu ebe obibi dịkwuo mma. Inwe achara toro eto na ulo, obughi nani na o na acho ime ulo gi nma, kama o na ewetara gi uba na uba.
Achara dara n ’anya mara mma ma dịkwa ọcha, na otu mpempe, ọ na-eguzo n’ụzọ dị mma; ha na ọtụtụ iberibe jikọtara ọnụ, ha ga-ewu ụlọ elu magburu onwe ya, dị ka pagoda ndị China; achara gburugburu dị ka igwe ojii na-agagharị na fairies na-efegharị, achara dị ka dragon China dị njikere ife.
Port nke Loading: shenzhen, China
Ebute oge: 50 ụbọchị mgbe na-anata ego
Basic dị mkpa nke hydroponis:
Tupu ịkọ ihe, bipụ epupụta na isi nke cuttings, ma belata isi ya na mma dị nkọ n'ime nkwụsị. Mbelata ndị ahụ kwesịrị ịdị mma iji dọọ mmiri na nri. Gbanwee mmiri ọ bụla 3 na 4 ụbọchị. Emegharịna ma ọ bụ gbanwee ntuziaka n'ime ụbọchị iri. Mgbọrọgwụ ọlaọcha na-acha ọcha nwere ike itolite n'ihe dịka ụbọchị 15. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgbanwe mmiri mgbe ị gbanye mgbọrọgwụ, ma tinye mmiri na oge mgbe evaporation nke mmiri na-ebelata. Mgbanwe mmiri na-agbanwe mgbe niile nwere ike ime ka akwụkwọ edo edo na alaka daa. Mgbe gbanye mgbọrọgwụ, tinye obere fatịlaịza fatịlaịza n'oge iji mee ka epupụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na alaka ahụ buru ibu. Ọ bụrụ na Fertilization adịghị ogologo oge, osisi ga-eto nke ọma na akwụkwọ ga-adị mfe edo edo. Otú ọ dị, njikọta spam ekwesịghị ịkarị oke, ka ọ ghara ime "mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ" ma ọ bụ mee ka ọ too eto.
Mma osisi na ekele; Mee ka ikuku dị mma na ọrụ disinfection; belata radieshon; weta ọfọ ọma.
Nke gara aga: Nnennen kechioma achara Dracaena Sanderiana Kwụ Ọtọ
Osote: Lotus achara kechioma Bamboo osisi dracaena sanderiana